Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle oo soo dhoweeyay go’aanka dowladda Soomaaliya – dulmidiid
August 21, 2017 Warka No comments
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle oo soo dhoweeyay go’aanka dowladda Soomaaliya
Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Hirshabeelle Sheekh Cusmaan Barre ayaa soo dhoweeyay go’aankii dowladda Federaalka Soomaaliya ku taageertay xil ka qaadistii Madaxweynihii hore Cali C/llaahi Cosoble.
Waxaa uu sheegay inay soo dhoweynayaan go’aanka Golaha Wasiirada ay ku gaareen inay ku raacaan sharciyada kalsooni kala noqoshada Baarlamaanka Hirshabeelle ay xilka uga qaadeen C/llaahi Cosoble.
“Aad iyo aad ayaa uga faraxsanahay go’aankaas, waa uga mahad celineynaa dowladda Federaalka inay raacdo sharciyada kalsooni kala noqoshada Baarlamaanka Hirshabeelle ay xilka uga qaadeen madaxweynihii hore”ayuu yiri Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle
Sidoo kale waxaa uu sheegay inay guda geli doonaan howsha doorashada Madaxweynaha, isla markaana muddo 30 cisho gudahood lagu soo dooranayo Madaxweynaha.
Mar uu ka hadlayay diidmada ka soo yeertay Cali Cosoble oo sheegay inuu wali yahay Madaxweynaha sharciga ayaa sheegay in Soomaalida ay dabeecad u tahay qofkii xil laga qaado inuu diido, taasna ay macno badan soo kordhineyn, isla markaana ay howshu tahay mid isku dhamaaday oo go’aan Baarlamaan oo dastuuri ah uu yahay.
Golaha Wasiirada ayaa shalay ayiday go’aankii xil ka qaadista Madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali C/llaahi Cosoble, kaddib markii warbixin laga dhageystay Wafdi Wasiiro ahaa oo safar xaqiiq raadin ku tagay todobaadkii hore magaalada Jowhar.